Filtrer les éléments par date : dimanche, 16 janvier 2022
dimanche, 16 janvier 2022 20:11
Andekaleka : Hiverina hamokatra herinaratra indray
Andro aman’alina ny asa ifarimbonan’ny mpiasan’ny Jirama, ny misionera DEXO, ny Corps de Protection Civile, ary ny Miaramila ao amin’ny foibe famokarana herinaratra ao Andekaleka, hiverenan’ny famokarana herinaratra ka hampihenana miandalana ny delestazy.
Fanamby hoy ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo, Andry Ramaroson, ny hamerenana haingana ny fampihodinana indray ny "Groupe n°2" mba hamokarana herinaratra 30MW.
Rahampitso alatsinainy no heverina hanombohan’ny andrana elektrika. Gropy iray aloha no ho tafiditra ary dia hiverina hamokatra herinaratra manomboka amin'io herinandro ho avy io Andekaleka ka hampihena ny delestazy.
Hafainganina ny hampidirina ny gropy faharoa afaka herinandro any, araka ny fanazavana hatrany.
(Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 16 janvier 2022 17:33
CAN 2021 : Namono tena ilay mpitam-bolan'ny fikambanan'ny mpamboly Cacao tany Ghana
Lehilahy mpitam-bola efa misotro ronono, Gyasehene Dawuriso, 76 taona, no nampiasa ny volan'ny fikambanan'ny mpamboly Cacao tany Asante Akyem, avaratry Ghana, nentiny niloka tamin'ny lalao CAN any Cameroun, ka nahavery vola azy 11 124 797 Franc CFA (77 000 000ar).
Tsy nanana vahaolana anefa ny lehilahy, ka dia nisafidy ny lalan'ny famonoana tena, ka nirahiny ny zanany lahy hamana rano, dia nararaotiny nandritra ny tsy naha teo ny zanany no nanantonany ny tendany tao amin'ny efitra nipetrahan'izy ireo.
dimanche, 16 janvier 2022 14:03
Tennis Open d'Australie 2022 : Voaroaka i Novak Djokovic fa tsy manaiky anao Vaksiny
Firenena maro ankehitriny no mametraka ny tsy maintsy anaovana Vaksiny iarovana amin'ny Covid-19, vao afaka mandray anjara na miatrika ireny famoriam-bahoaka, toa ny fanatanjahan-tena, cinéma, restaurant, hetsika koltoraly.
Tonga hiatrika ny fifaninana iraisam-pirenena amin'ny Tennis any Australie ny tompon-daka manerantany Novak Djokovic.
Ny 05 janoary 2022 i Novak Djokovic, mizaka ny zom-pirenena Serbe, no tonga tany Australie, avy hatrany dia notazonina any amin'ny faritra fametrahana ireo mpivahiny tsy ara-dalàna izy, satria tsy vita Vaksiny, izy rahateo nanambara fa tsy hanao Vakisiny iarovana amin'ny Covid-19.
Nametraka fitoriana teo anivon'ny fitsarana Ostralianina izy, ka nahazo Visa ary afaka niditra ny Australie, ary nanomboka nanao fanazaran-tena.